Jeneraly manampi-maso sy manao miao… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Maro ny vaovao niarahana niaina teto. Tao ny jeneraly nangataka dolara iray isan’olona. Fa nisy ity minisitra niala sa nanala ka tsy fantatra izay tena ao ambadika. Fa teo koa ireo mpanao gazety izay nampanantsoina fa tian’ny zandary ho hita akaiky ny tavany fa tsy fandrahonana akory no antony.
Nangataka dolara iray isan’olona ity jeneraly iray fa izany hono no vahaolana ahafahany mividy raopilanina tsa vao vita na angindimby. Mangidy tokoa anie izany mandre jeneraly manao miao re olona a. Efa mitalaho sy mitoreo ity jeneraly.
Dia hoy i Olivier Olivier Randrianatoandro
Mba miangavy anareo hono izay manana
Fa tena tsy ampy ny eto am-pelan-tanana
Mipetra potsiny ireto saofera
Mba hividianana helikoptera
Aza alaina baràka ity fitondràna
Fa tsisy mahantra hono eto an tanàna
Ilay taloha nilaza fa ny vola dia misy
Izao indray mitady ny plisy plisy
Ndehàna mangataka any amin’i Zandry
Satria ianareo ilay nanome sandry
Nanampy azy tamin’ilay nanongana
Ny azy izao mety,ny anareo mitotongana
Ndehàna mangataka any amin’i Deba
Nankaiza daholo ny vola naorony
Lazainy fa tsy nisy na dia rebareba
Jereo fa misokatra ny lavak’orony (…)
Dia efa sahy lahy ity jeneraly. Moa tsy efa fanitarana ny hetra isan-dahy ho hetra mian-dahy miam-bavy fa izany ? Fa nahoana no dia manao izany ? Ny dahalo eo anoloana efa mamely dia ianao ve ry jeneraly mbola handefona ireo sisa tsy maty ? Lozanao.
(…)Tsy hoe mandatsa na koa mikafara
Tsy olana amiko izay iray dolara
Fa mba miverena amin’ireo vahoaka
Fa tao amin’ireo ianareo no nivoaka
Ny eto anie ka tsy faha mpanjaka
Ka izay mitondra dia hahazo laka
Koa miovà haingana raha tena maika
Fa vonona izahay ny hanao tsipaipaika
Nanamarika ny faha-90 taona nisiany ny Gazety Lakroan’i Madagasikara. Arahabaina ianao ry zokiny indrindra amin’ny gazety mivoaka eto antanana. Zao anefa toa zary nandalo fotsiny izany fa na RaFanja aza toa tsy re niarahaba anao sa ianao sy ny tsy misy no nampitoviany ? Angamba. Tsoriko kosa fa zaranao koa aza tsy fantany fa malalaka kokoa ianao hanatontosa ny fanambinao hoe “feon’ny tsy manam-peo”. Jereo ihany anefa RaLakroa fa sao miteny an’efitra ianao. Etsy ankilany tokoa dia misy ireo mpiara-miasa aminao eo amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety no hanaovan-dry zalahy sonema. Nampanantsoina rehefa namoaka ilay fandaharana “tsy azo tsampona”. Sampona ho’aho isika e.
Dia hoy notsiahivin’ny poety Andy Rebabe ny nambarany tany aloha tany.
Ho an'ialahy poeta sy ialahy mpanao gazety
Toa te hiteny ialahy, te hidradra mihitsy
fa sarintsariny ihany
ny zo sy ny safidy;
fa resabe sy fitaka
ny tena fahafahana,
fa kabary lava ambony vavahady
ny sata sy saranga
lazaina fa mitovy.
Kanefa ialahy tsy afaka, na dia maniry mafy !
fa voafehy ny vava,
tadiavin'"ny mpitondra" ho vidiana vola
fa voafehy ny tanana,
k'izay tian'"ny ngeza" no asainy ambara lava
fa voafehy ny maso;
takonana abobo sy resa-politika
fa voafehy ny sofina ;
tsy manan-jo hihaino ny marina rehetra ?
Kanefa izao tsarovy, mpanoratra ialahy
mpanao gazety sambatra :
andry andrasanay hijoro am-pahasahiana,
loharano soa hamelon'aina anay matin-ketaheta,
afo sy fanilo hany manazava ny haizinkitrokay,
tany itsanganan'ny tongotray marefo sy kere,
habakabamanga antenaina hitondra fanan'ny johary !
Hangina ve ialahy ? ho moana an-tsitrapo
sa hanampimaso, hanao raosy jamba ?
minia hanampi-tsofina, minia ho bemarenina,
sa hamonkon-tanana, hamihina ny azo ?
Mba saino ho'aho lehiroa......
.....ho lo anie ny penina é !
Andy Rebabe 24 novambra 2012
Ahitana izany fa ny omaly tsy miova ny fiainanao mpilaza vaovao. Efa tany amin’ny taona 2012 no noraketina an-tsoratra izao ary dia mbola ny omaly ihany no anio. Koa sahia manova fa ny penina no fitaovanao, ny rezo sosio no basy marovavanao…
Fa isan’ny nanaitra koa ny fametraham-pialan’ny minisitra Gervais. Tsy idirako izay antony nametrahan'Andriamatoa Minisitra ny fialana fa DERAIKO ny fomba filazany AMIN'NY TENY MALAGASY tsy mifangaro teny vahiny hoy i Andy Rebabe.
Fa inona tokoa re no ao ambadik’izao fialana izao ? Araho ny fitsokan’ny rivotra politika hoy ny fomba fitenin’ny Rouges Experts fahiny. Tsy miova izany hafatra izany. Toy ny ao anaty lakana misy lay isika ka manaraka ny fitsokan’ny rivotra rehefa tsy mahatakatra sambo mandeha amin’ny motera. Fa ao ireo milaza fa resaka vola vaovao no nahakivy ity mpampianatra. Tsy ny kalitaon’ireo ravim-bola akory fa ny tsy manaram-penitra ny famoahana azy na ny fotoana ny fombafomba namoahana azy. Ao ireo miteny fa misisika mafy loatra ny Sinoa ka tsy manaiky mora foana ny tandrefana.
Dia hoy ary i Andy Rebabe
Razery ve ?
Razery ve no diso
Sa ireto piso
Fa indro efa atolotra
Izay handimby azy ?
Tsy niandry tamby
Nisedra vazivazy ?
Razery ve no fositra
Nandà ireo tolo-botsitra
Sy tifitra an-takonana
Nataon'ireo mpanenjika ?
Razery mafy fo
Tsy mety mba niaro
Tamin'ny endrikendrika ?
Razery ô ! Razery
Ovay ny fijery
Diniho ireo mpiserana
Manao ny fomba rehetra
Be tetika voretra
Handimby sy handroba
Tsy mahalala fomba !
Amboa mitafy ondry
Mpandaka tsy hita maso !
Sa ireto piso ?
Andy Rebabe ( sao dia ataon'ialahy hoe...)
17 juillet, 19:34 ·
Tsy idirako izay antony nametrahan'Andriamatoa Minisitra ny fialana fa DERAIKO ny fomba filazany AMIN'NY TENY MALAGASY tsy mifangaro teny vahiny hoy Andy Rebabe.
Fa inona tokoa re no ao ambadik’izao fialana izao ? Araho ny fitsokan’ny rivotra politika hoy ny fomba fitenn’ny Rouges Experts fahiny. Tsy miova izany hafatra izany. Toy ny ao anaty lakana misy lay isika ka manaraka ny fitsokan’ny rivotra rehefa tsy mahatakatra sambo mandeha amin’ny motera. Fa ao ireo milaza fa resaka vola vaovao no nahakivy ity mpampianatra. Tsy ny kalitaon’ireo ravim-bola akory fa ny tsy manaram-penitra ny famoahana azy na ny fotoana ny fombafomba namoahana azy. Ao ireo miteny fa misisika mafy loatra ny Sinoa ka tsy manaiky mora foana ny tandrefana.
Fa ny vaovao farany nahoraka teto antanana dia ity hoe
“Hody hono i Marc Tatandraza”.
dia misy manisy sira hoe
mitahia rehefa lasan-ko raza.
Tsaroako ny fitenin’ny ankizy fahiny
Aleo handeha izay tsy tamana
fa izahay koa tsy mitana
Veloma iaby antikany fa amin’ny manaraka koa manao misimisy rô.